+30 अप्टिकल भ्रमहरू जुन तपाईंले देख्नु भएको हरेक चीजमा शंका लाग्दछ क्रिएटिव अनलाइन
+30 अप्टिकल भ्रमहरू जुन तपाइँले देख्नु भएको हरेक चीजमा शंका लाग्दछ
हाम्रो दिमागमा प्रोग्राम गरिएको छ तपाईंले देख्नुहुने छविहरूको व्याख्या गर्नुहोस् र केही निष्कर्षहरू कोर्नुहोस् सम्झना र विगतका अनुभवहरूको रूपमा यो जानकारीको खातामा। यदि हामीले यस र मस्तिष्कको कार्यलाई ध्यानमा राख्यौं र केही अवस्थाहरूमा टकटकी हेर्दा हामी अचम्मका अप्टिकल भ्रमहरू सिर्जना गर्न सक्दछौं। मस्तिष्कलाई भ्रमको माध्यमबाट पूरक बनाउन बाध्य पार्ने अप्रत्याशित रचनाहरू।
त्यसो भए म तपाईंलाई दिनको अन्त गर्न छोड्छु Aw 35 अद्भुत अप्टिकल भ्रम:
यी दुई वर्ग एकै रंगमा चित्रित छन्, यद्यपि यो विश्वास गर्न गाह्रो छ। दुई बीचको सीमामा आफ्नो औंला राख्नुहोस् र तपाईं तिनीहरूलाई जाँच गर्नुहुने छ, यद्यपि यदि तपाईंलाई शंका लाग्छ भने तपाईं यसलाई सधैं एडोब फोटोशपमा आईड्रोपरको साथ जाँच गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई भनेको कर्न्सवीट अप्टिकल भ्रम भनिन्छ र यसले मस्तिष्कको पार्श्व निषेधको शोषण गर्दछ, जसले दुई वस्तुहरूको बिचमा भिन्नता ल्याउँदछ जब उनीहरूको भिन्न रंगका किनारहरू हुन्छन्।
यदि तपाईंले आफ्नो आँखा पार गर्नुभयो भने तपाईंले सर्कलहरू बीचमा एक प्रसिद्ध व्यक्तिको अनुहार हो भनेर पत्ता लगाउनु हुनेछ।
यदि तपाईं करीव १० सेकेन्डको लागि यस महिलाको नाकमा हेर्नुहुन्छ र एक राम्रो जलेको सतहमा हेर्दा द्रुत झिम्काउनुहुन्छ भने, तपाईं यस महिलाको अनुहार रंगमा देख्नुहुनेछ।
यी तीन कारहरू धेरै फरक आकारहरू देखिन्छन् तर ...
सत्य यो हो कि हामी पोन्जोको भ्रमको सामना गरिरहेका छौं। यसले कार्य गर्दछ किनकि हाम्रो दिमागले ती वस्तुहरूको आकारलाई उनीहरू बीचको दुरी रहेको दूरीको आधारमा न्याय गर्दछ। तेस्रो कार जुन हामीले छविमा देख्छौं अन्यबाट धेरै टाढा रहेको देखिन्छ त्यसैले यस्तो ठूलो आकार देखिन्छ।
तलको GIF मा तपाईले देख्नुहुनेछ कि पोइन्टहरू र color परिवर्तन गर्न पनि त्यस्तै समय लाग्छ जुन उनीहरू रचनात्मक केन्द्रको वरिपरि परिक्रमा गर्छन्, तर यदि हामीले हाम्रो आँखा एकमा केन्द्रित गर्‍यौं र त्यसलाई अनुसरण गर्‍यौं भने फेला पार्नेछ कि त्यहाँ कुनै प्रकारको घुमाव वा रंग परिवर्तन छैन। ।
यदि तपाईंले केहि सेकेन्डको लागि निम्न एनिमेसनको बीचमा क्रस हेर्नुभयो भने तपाईं वरपरका गुलाबी थोप्लाहरू कसरी गायब हुन्छन् भन्ने कुरा पत्ता लगाउनुहुनेछ।
यस पार्कमा तपाईले त्रि-आयामिक घाँस ग्लोब देख्नुभयो, हैन?
वास्तवमा यदि हामीले हाम्रो हेराईको कोण परिवर्तन गर्‍यौं भने, हामी निम्न पत्ता लगाउनेछौं:
यी दुई मध्ये सुन्तलाको सर्कल कुन ठूलो छ?
साँच्चै, तिनीहरू एकै आकारका छन्।
यस प्रकारको अप्टिकल भ्रमलाई एबिंगहौस भनिन्छ र यसले वस्तुहरूको हाम्रो धारणा र विशेष गरी तिनीहरूको सापेक्ष आकारको वर्णन गर्दछ। जब कुनै वस्तु ठूलो चीजहरूले घेरेको हुन्छ यो सानो भन्दा सानो देखिन्छ यसको विपरीत हो।
यदि तपाईं केन्द्रको पहेलो बिन्दुमा हेर्नुहुन्छ र स्क्रिनको नजिक जानुहुन्छ भने गुलाबी घण्टीहरू कसरी चल्दछन् तपाईंले देख्नुहुनेछ।
पिन - ब्रेस्टफा भ्रम परिधीय दृष्टिमा त्रुटिहरूको कारण देखा पर्दछ।
यद्यपि यो विश्वास गर्न गाह्रो हुन सक्छ, बक्स A र B समान रंग हो:
हाम्रो मस्तिष्क स्वचालित रूपमा वरपरका छायाहरूको रंगमा समायोजित हुन्छ। किनकि बी हरियो सिलिन्डरको छायामा छ, तर यो अझै पनि A जस्तै रंग हो, मस्तिष्कले यो खैरोको हल्का छाया जस्तो सोच्छ।
केहि सेकेन्डका लागि यो एनिमेटेड भँवरो हेर्नुहोस् र तल छविमा हेर्नुहोस्।
अघिल्लो व्हर्लपुल अवलोकन गर्दा हाम्रो आँखाले धेरै काम गर्छ र यस बिन्दुमा थकित हुन्छ कि स्थिर छविहरू जीवनमा आउँदछन् जब हाम्रो आँखा निको हुन्छ।
एम्स कोठाले हामीलाई परिप्रेक्ष्यको भ्रम प्रदान गर्दछ तर वास्तविकतामा कोठाको आकार ट्र्यापेजॉइडल हो र वर्ग होइन। भित्ता र छत एकै समयमा ढल्केको छ।
यी ब्लकहरू बिभिन्न दर सहि लाग्छ दायाँ?
जब कालो बारहरू एनिमेसनमा हटाइन्छ, हामी देख्छौं कि तिनीहरू वास्तवमा उही गतिमा गइरहेका छन्। समानान्तर रेखाहरूले हाम्रो दिमागमा आन्दोलनको धारणा विकृत गर्दछ।
यदि तपाईं बिस्तारै यस छविमा पुग्नुभयो भने यस्तो देखिनेछ कि उज्यालो उज्यालो र उज्यालो हुँदै जान्छ।
यो एक गतिशील ग्रेडियन्ट ल्युमिनन्स प्रभाव हो जुन एलन स्टब्सद्वारा पत्ता लगाइएको थियो।
यस तस्विरको र center संस्करणको बीचमा नजीक हेर्नुहोस्, यसलाई कालो र सेतो संस्करणमा बदल्नको लागि कुर्नुहोस्, र त्यसपछि तपाईं र the छवि देख्नुहुनेछ।
हाम्रो दिमाग एक समयका लागि रंगहरू राख्छ जुन यसलाई खुला गरिएको छ, यस अवस्थामा रंगहरू सुन्तला र नीलो।
यस चित्रमा देखा पर्ने सबै डटहरू सेता छन्, तर केहि कालो छन्। यस अप्टिकल भ्रम को लागि स्पष्टीकरण अझै समेटिएको छैन।
कालो रेखाका साथ पानाहरू मार्फत ब्रसअप एनिमेसनहरू सिर्जना गर्न सक्षम छ।
तलको डायनासोरहरूको आँखा हामी पछ्याउँदछ जुन हामी अघि बढ्छौं।
विवरण वास्तवमा एकदम सरल छ, यी पुतलीहरूको अनुहारको आकार खाली छ र अवतल आकार छ यद्यपि यसमा सामान्य उत्तल जस्तो देखिन्छ।
Akiyoshi Kitaoka ज्यामितीय तत्व, साथ साथै चमक र रंग संग रचना को शक्ति har harizes। नतिजा अझै पनी छविहरू जुन चलिरहेको देखिन्छ।
समान प्रविधिहरूको प्रयोग गरेर, रान्डोल्फले निम्न प्रकारको भ्रम सिर्जना गर्न सक्षम छ:
डबल एक्सपोजर प्रभावको माध्यमबाट पाब्लो पिकासोको शैलीमा दुई भिन्न दृष्टिकोणबाट व्यक्तिहरूको तस्विर बनाउन सम्भव छ।
यो सबवे कुन दिशामा चल्दछ? यसलाई केहि समयको लागि हेर्नुहोस् र त्यसपछि झिम्काउनुहोस्, तपाईंको दिमागले दिशा परिवर्तन गर्दछ।
यी तीन नर्तकहरू कुन बाटोमा फर्कन्छन्?
केन्द्रीय महिला एकै साथ घुमाउँदछ पक्षको रूपमा। यदि तपाइँ दायाँ कलाई मा हेर्नुभयो भने तपाइँ कसरी यो विपरित दिशामा बायाँ क्षेत्रमा अवस्थित एकमा सर्दछ देख्नुहुनेछ। यदि तपाईंले केन्द्रमा रहेको एक हेराई गर्नुभयो भने, तपाईं देख्नुहुनेछ कि तिनीहरू सबै समान दिशातर्फ सर्छन्।
यी वस्तुहरू वास्तविक र त्रिमितीय देखिन्छन्, यद्यपि तिनीहरू सपाट छविहरू हुन्।
केहि सेकेन्डको लागि हरियो डटमा हेर्नुहोस् र त्यसपछि झिम्काउनुहोस्। तपाईले देख्नुहुनेछ कि पहेँलो थोप्लोहरू हराउँछन् र जब तपाई पलक झिलमिलिन्छन्
पहेंलो थोप्ले वास्तवमा कहिले पनि हट्दैन। अझै छविहरू हाम्रो चेतनाबाट खस्न छिटो हुन्छन्, विशेष गरी जब लगातार छविहरू परिवर्तन हुँदैछन्।
यो एक मास्क जस्तो देखिन्छ, हैन?
यो वास्तवमै एक जोडी चुम्बन हो।
पहिले तपाईंले सोच्नुहुनेछ कि तपाईंले तीन आकर्षक महिलाहरू देख्नुहुनेछ ...
यो विश्वास गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस्, पिसाको दुई टावरहरू उस्तै उस्तै छन् र, यद्यपि यो दायाँतर्फ रहेको बढी झुकावमा छ जस्तो देखिन्छ, यो छैन।
तेर्सो रेखाहरु ढलान जस्तो देखिन्छ, तर पर्याप्त लामो देखिन्छ र तपाई देख्नुहुनेछ कि ती एक अर्कासँग समानान्तर छन्।
यी ओभरल्यापि circles सर्कलहरू वास्तवमै पूर्ण रूपमा गोल छन् र एक अर्कालाई छुदैनन्
फ्ल्याटहेड तालमा पानी यति स्पष्ट छ कि यो धेरै उथलपुथल देखिन्छ। के तपाईं विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ कि यो वास्तवमा ११२ मिटर गहिरो छ?
यो एक सरल फोटोग्राफिक भ्रम हो, तर धेरै चतुर
यस थ्रीडी पेंट गरिएको कोठामा भुइँ छैन जस्तो देखिन्छ।
यदि तपाइँ कोरिडोरको भित्ताहरू तपाइँको हातले छोप्नुहुन्छ र तपाइँ कसरी अग्रिमको गति कम हुन्छ देख्नुहुनेछ। यदि तपाईंले केन्द्रलाई कभर गर्नुभयो भने गति बढ्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » कलाकारहरू » +30 अप्टिकल भ्रमहरू जुन तपाइँले देख्नु भएको हरेक चीजमा शंका लाग्दछ
शमूएल फलेरो भन्यो
FANTASTIC !! धन्यवाद !!
शमूएल फलेरोलाई जवाफ दिनुहोस्
धेरै राम्रो अप्टिकल भ्रम, तिनीहरूले मेरो मनोरन्जन, म साझा
एक शौकको रूपमा, उत्कृष्ट, र उत्तम कुरा बुझ्नको लागि हाम्रो मस्तिष्कले कसरी ट्रिक गर्दछ
एक पटक एक समय वाल्ट डिस्ने: महान जीनियस का प्रभाव
ग्राफिक डिजाइनरहरूको लागि आधारभूत मोडेल सम्झौता